laacibfm.com » RASMI: Eden Hazard Oo Maca-salaameeyey Xili Ciyaareedka Iyo Real Madrid Oo Xaqiijisay In Dhaawac Jabniin Ah Soo Gaadhay
RASMI: Eden Hazard Oo Maca-salaameeyey Xili Ciyaareedka Iyo Real Madrid Oo Xaqiijisay In Dhaawac Jabniin Ah Soo Gaadhay
Xiddiga reer Belgium ee Eden Hazard ayaa si buuxda u macasalaameeyey xili ciyaareedka kaddib markii uu dhaawac kasoo gaadhay kulankii xalay ay kooxdiisu guul-darrada 1-0 ah kala kulantay Levante oo ay ugu tagtay magaalada Valencia.
Hazard ayaa la beddelay qaybtii dambe oo xoogaa socota, waxaana booskiisa soo galay Vinicius Junior, laakiin Zidane oo isla xalayba kasii hadlay ka hor inta aanay soo bixin warbixinta kooxda dhakhaatiirta ayaa waxa uu tibaaxay in xaaladda uu ku arkay Eden aanay ahayn mid wanaagsan.
Laacibkan oo xagaagii ay Real Madrid 120 milyan oo Euro kaga soo iibsatay Chelsea, ayaa laba usbuuc ka hor kasoo laabtay dhaawaca haleelay bishii November ee sannadkii hore, waxaana uu macallinka reer France boos bilow ah siiyey laba kulan, hase yeeshee waxa uu hadda si toos ah uga bixi doonaa shaxda uu macallinku ku xisaabtamayo kulamada u hadhay.
Warbixin ay kooxdu soo saartay ayaa waxay ku sheegtay in dhaawac jabiin ah uu Hazard kasoo gaadhay lugta midig, laakiin laguma sheegin waqtiga suurtogalka ah ee uu kusoo laaban doono garoomada.
“Waqtiga sookabashadiisa waa la qiimayn doonaa.” Ayay kooxdu tidhi.
Dhinaca kale, wargeyska Marca oo kasoo baxa caasimadda Spain ee Madrid, si dhowna wax uga qora Real Madrid ayaa waxa uu sheegay in Hazard aanu seegi doonin kulamada Man City iyo Barcelone oo kaliya, laakiin ay u dhamaatay xili ciyaareedkiisa oo aanu kusoo laaban doonin bilaha soo socda.
Si kastaba ha ahaatee, Hazard ayaa horyaalka Spain kula bilowday dhaawacyo xili ciyaareedkiisii ugu horreeyeyba, waxaana uu midkan ugu dambeeyey kusoo beegmay xilli Los Blancos u baahayd adeeggiisa iyo waliba goolal uu u dhaliyo.